GOVERNORAN’NY FARITRA SOFIA : "Aleo ampandeferina aloha ny tombontsoa manokana hiarovana ny vahoaka"
Samy miezaka manatratra ny fanamby nankinin’ny Filoham-pirenena taminy ireo Governoram-paritra efa voatendry. Tsy miandry ny Fitondram-panjakana foibe intsony izy ireo fa avy hatrany dia mandray ny andraikitra tandrify azy indrindra amin’izao vanim-potoana sarotra lalovan’ny Firenena noho ny aretina coronavirus izao. 6 avril 2020
Nifampitafa mivantana tamin’ireo mpamily fitateram-bahoaka ao amin’ny Faritra Soafia ny Governora Lylison Rolland de René tamin’ ny sabotsy lasa teo. Nandritra izany no nitondran’ireto mpamily ireto ny olana mianjady aminy, ary nangatahan’izy ireo ny mba hisian’ny marimaritra iraisana hamahana ny olana noho ny fijanonan’ny fitateram-bahoaka ao amin’ny Faritra Sofia. Namaly ny hetahetan’izy ireo ny Governora saingy nambarany fa tokony hohajaina aloha ny fanambaràna nataon’ny Minisitry ny atitany mahakasika ny fepetra ara-pahasalamana napetraka toy ny elanelana iray metatra, fisorohana ny fitangoronana be loatra sy ireo maro hafa.
Notsindriany koa fa mikaon-doha isan’andro ny kaomity miaro ny aretina coronavirus ao amin’ity Faritra ity hiarovana ny vahoakan’i Sofia sy mba hahafahana mifehy ny tsy hiparitahan’ny valanaretina Coronavirus. "Tsy misangy io aretina io ary mahafaty raha tsy mitandrina. Entanina isika hiaro ny vahoaka rehetra, aleo ampandeferina ny tombontsoa manokana aloha ho fiarovana ny vahoaka", hoy ny nambarany. Ankoatra izay, mihatra any amin’ny Faritra Sofia koa ireo fepetra maro hanakanana ity tsimokaretina ity tsy ho tafiditra any an-toerana.
Arahi-maso sy atao fitiliana avokoa ireo rehetra mivoaka sy miditra ny Faritra ary avy hatrany dia atoka-monina ireo ahitana trangan’aretina mampiahiahy.